Saudi journalist tortured to death in prison – Heemaal News Network
The Sons Of Jamal Khashoggi Told CNN
Ciyaaryahan Lagu Magacaabo Somalia Kana Ciyaara Faransiiska Oo ku Biiray Xulka al-Shabab.(Sawiro)
Ciyaaryahanka Wergiton do Rosario Calmon oo caan ku ah magaca Somália ayaa saddex-dii sano ee la dhoofay u safanayay naadiga faransiiska ah ee Toulouse. Balse 29-jirkan u dhashay dalkaasi Brazil ayaa haatan heshiis la galay […]
Maxkamada Dalka Sucuudiga Oo Nin Fanaan ah ka Horjoogsatay Haweeney Uu Guursan Lahaa.
Maxkamad ku taal dalka Sucuudi Carabiya ayaa xukuntay in haweeney dalkaasi u dhalatay aanay guursan karin nin ay ragga ka soo xulatay kaasoo lagu eedeeyay inuu miyuusic garaaco ama fanaan yahay. Garsoorka ayaa ninkaasi waxa […]
Ururka Xasaradaha Adduunka Oo ka Digay in Khilaafka Khaliijka Uu Sameeyo Somaliya.
Ururka xasaradaha adduunka ayaa ka digaya in muranka kharaar ee u dhexeeya dawladaha khaliijka Carabta uu khatar ku yahay oo uu wiiqayo daganaanshaha Soomaaliya. Ururku wuxuu siyaasiyiinta Soomaaliyda Ugu baaqay in ay joojiyaan in ay […]